हार्ड पानी घर वा अपार्टमेन्ट को प्रयोग मात्र भाँडा मा limescale को उपस्थिति तिर जान्छ, तर पनि घरेलू उपकरण को विभिन्न प्रकार को तीव्र टूटने गर्न: वाशिंग मिसिन, Dishwashers, हीटर, बयलर, आदि यसैबीच, गाह्रो छैन हाम्रो समय मा यो समस्या समाधान गर्न .. । पानी सफ्नर लागि विशेष फिल्टर संग बाथरूम वा तहखाने मा खरीद र भान्सा मा स्थापना गर्न, यो Suffice। आजको बजार मा यस्तो उपकरणहरू को प्रकार, त्यहाँ धेरै छन्।
मुख्य प्रजातिहरू softeners,
पानी को हटाउन क्याल्सियम र म्याग्नेसियम लवण प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै यन्त्रहरू:
यांत्रिक। मूलतः यो एक उल्टो असमस प्रणाली छ।
रासायनिक। यस्तो बोट अक्सर फिल्टर भद्दा र ठीक फिल्टर संग जटिल मा ठूलो देश घरहरू स्थापित।
Nonchemical। यो समूहको घरहरू र अपार्टमेन्ट मा उन्नत विद्युत फिल्टर अक्सर स्थापित छन्।
उल्टो असमस प्रणाली को खोल मा सिधै माउन्ट छन्। रासायनिक र reagentless फिल्टर मुख्य रूप ढाड रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले घर मा प्रयोग गर्दा अक्सर पूरा मृदुकरण, पानी शुद्धीकरण गरेको छ। यस मामला मा फिल्टर निर्माण गर्न वा caisson मा प्रवेश मा कुल प्रवाह रेखा लागि सेट गरिएको छ। साथै, यस्तो softeners, सीधा बयलर नजिकै पाइप गर्न, त्यसैले मिसिन धोइदिनुभएर र माउन्ट गर्न सकिन्छ। डी
उल्टो असमस प्रणाली: सञ्चालन सिद्धान्त
द्वारा र ठूलो, उपकरण को यस प्रकार मुख्य रूप एक सार्वभौमिक ठीक फिल्टर रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तथापि, प्रणाली मा डिजाइन उल्टो असमस को लवण हटाउन डिजाइन गरिएको छ विशेष Perforated झिल्ली सहित समावेश छ। यो सामाग्री मा प्वालहरू यस्तो सानो व्यास मात्र तिनीहरूलाई मार्फत आफूलाई सक्नुहुन्छ पानी अणु पारित भनेर। यसलाई मा निहित कुनै पनि अशुद्धताओं फिल्टर सतह मा सञ्चय छन्।
रूपमा रासायनिक softeners, काम
उल्टो असमस प्रणाली मुख्य रूप पानी पिउने को शुद्धीकरण लागि शहर अपार्टमेन्ट मात्र प्रयोग गरिन्छ। रासायनिक softeners, - ठूलो निजी घरमा राम्रो थप कुशल उपकरण स्थापना गर्न। यस्तो उपकरणहरू साधारण आयन विनिमय को सिद्धान्त मा सञ्चालन। आफ्नो शरीर सोडियम को ठूलो मात्रा समावेश विशेष जेल राल राखे छ। पानी संग सम्पर्क मा, यस कठोर सदस्य इच्छित प्रभाव हासिल छ कि परिणाम संग, क्याल्सियम र म्याग्नेसियम संग साटासाट छ।
यो प्रजाति को जल मृदुकरण लागि फिल्टर धेरै वर्ष को लागि घर मा सेवा गर्न सक्षम छ। यो यस्तो उपकरणहरू र उच्च गति शुद्धीकरण को एक लाभ मानिन्छ। को को बेफाइदा साधारण राल को आवधिक खरिद र प्रतिस्थापन गर्न केवल भन्छिन्।
अभिकर्मक-मुक्त softeners, को सञ्चालन सिद्धान्त
पोटासियम र मैंगनीज को कण समतल र सजिलै फरक सतहहरु लीन। भाँडा र घरेलू उपकरण प्रकारका गुच्छे को विभिन्न प्रकार को विवरण को पर्खालहरु मा हार्ड पानी प्रयोग गर्दा किन छ। चुम्बकीय क्षेत्र को प्रभाव अन्तर्गत नुन कणहरु धेरै संकीर्ण र लामो सुई को फारम लिन। र, फलस्वरूप, केहि लीन गर्न सक्दैन। यसबाहेक, मात्रा यस्तो सुई पुरानो पत्र मा अभिनय गरेर बिस्तारै मिट।
पानी सफ्नर फिल्टर अभिकर्मक-मुक्त घर जस्तै कम लागत, लामो जीवन र स्थापना सजिलो रूपमा लाभ द्वारा मुख्यतया प्रतिष्ठित छ। अपार्टमेन्ट र घरहरू थुप्रै मालिक पनि स्क्राच देखि आफ्नै जस्तै उपकरण सङ्कलन। अभिकर्मक-मुक्त फिल्टर केही कमी मात्र मानिन्छ एक शक्ति आउटलेट जडान गर्न आवश्यक छ। बिजुली, जस्तै उपकरणहरू सामान्यतया5वाट उपभोग।
एक छानेर लागि सिफारिसहरू
तसर्थ, पानी unheated घरेलु मा शहर अपार्टमेन्ट मा केन्द्रिय राजमार्ग को सफ्नर वा प्वाल एक उल्टो असमस प्रणाली प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। यस्तो फिल्टर अपेक्षाकृत सस्तो हो। एकै समयमा, तपाईँ तिनीहरूलाई आफ्नै हात सहित माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आवश्यक उपकरण भण्डारण ट्यांक को मात्रा र फिल्टर परिवर्तन को जीवन ध्यान को चयन मा।
पनि अपार्टमेन्ट र कटेज मा जल मृदुकरण को लागि एक उत्कृष्ट छनौट र विद्युत reagentless फिल्टर हो। तिनीहरूले पनि सस्ता उल्टो असमस प्रणाली हो। तर, यस्तो उपकरण प्रयोग गर्दा बिजुली लागि अघि भन्दा एक सानो थप, पाठ्यक्रम, भुक्तानी गर्न हुनेछ। यस्तो उपकरण खरिद गर्दा मुख्यतया यसको क्षमता मा ध्यान गर्नुपर्छ। थोक अभिकर्मक-मुक्त फिल्टर कम गर्न डिजाइन गरिएको हुनुपर्छ पानी को राशि सामान्यतया निर्माण मा खपत छ जो छ।
रासायनिक softeners, एक ठूलो घरेलु को भूमि तल मा स्थापना को लागि आदर्श हो। आफ्नो चयनमा क्षमता ध्यान गर्नुपर्छ। साथै, (छ जो सस्तो) राल पनि अक्सर परिवर्तन हुनेछ भनेर निश्चित गर्नुहोस्। चयन गरिएका छन् जस्तै softeners, मस्यौदा को चरण मा पहिले नै हो सामान्यतया हाइड्रोलिक उपचार प्रणाली निर्माण को। तर, अन्य उद्देश्यका लागि फिल्टर संयोजनमा आफ्नो स्थापना अक्सर विशेषज्ञहरु भर पर्छन्।
किन्न निर्माता को यांत्रिक डिजाइन
घरमा वा एक घर मा जल मृदुकरण को लागि एक फिल्टर छनौट गर्दा, साथै, यसको ब्रान्ड ध्यान गर्नुपर्छ। अधिकांश आधुनिक निर्माताहरु यस प्रकारको उच्च गुणस्तरीय उपकरणहरू उत्पादन।
हामी यो मामला मा, उल्टो असमस प्रणाली कुरा भने, उदाहरणका लागि, राम्रो समीक्षा कमाएका छन्, यस्तो Raifil र "Atoll" को रूपमा ब्रान्डहरु। फिल्टर "Rife" स्थापना, थोक ट्यांक र समान अन्य निर्माताहरु मा समाप्ति को संग कारतूस प्रतिस्थापन गर्ने क्षमता यसको सजिलो को लागि प्रशंसा गरे। धेरै कुशलतापूर्वक को लवण पानी purified किनभने "Atoll" प्रणाली लोकप्रिय छन्।
राल र विद्युत फिल्टर: सबै भन्दा राम्रो ब्रान्ड
जल मृदुकरण को लागि एक मुख्य रासायनिक फिल्टर छनौट, यो ग्यालेक्सी उपकरणहरूमा, ध्यान उदाहरणका लागि, गर्न तिर्ने लायक छ। उपयुक्त "ग्यालेक्सी" "ड्राई" नुनीन ट्यांक संग सुसज्जित छन्, इकट्ठा गर्न सजिलो र वैकल्पिक पुनर्जनन मोड हो।
साधन को Reagentless समूह जस्तै लोकप्रिय ब्रान्ड "AkvaSchit" र "दीमक" को रूपमा सस्तो सहित घरेलू बजार मा प्रस्तुत गरिएको छ। पहिलो, पानी नरम गर्न सक्ने पनि घरेलू उपकरण देखि केही सय मिटर स्थित भइरहेको कुरा सराहना। साथै, तिनीहरूले चाँडै सतहहरु मा मात्रा loosen हुनेछ। "दीमक" ब्रान्ड उपकरणहरू प्रयोग गर्न सजिलो र दुवै पूरक सक्षम पनि छन् र घरमा रासायनिक softeners, प्रतिस्थापन गर्नुहोस्। साथै, त्यहाँ धेरै ठूलो व्यास को पाइप माउन्ट गर्नका लागि अभिप्रेरित यस्तो उपकरणहरू को मोडेल अवस्थित।
फिल्टर स्थापना जल सफ्नर: विशेषताहरु
उल्टो असमस प्रणाली सामान्यतया लागि ¼ ट्यूब र टी "पुरुष-महिला" एक क्रेन समावेश किरा पूरक। पानी मा यस्तो वाल्व र टाई-गरे उपकरण संग। साथै, सफ्नर यस प्रकारको प्रयोग गर्दा डुब्नु थप क्रेन र माउन्ट भण्डारण ट्यांक मा स्थापित छ।
जल मृदुकरण लागि रासायनिक फिल्टर, उल्लेख, प्रायः कुल पानी उपचार प्रणालीमा समावेश। यसरी पहिलो फिड पाइप मा Organics हटाउनका लागि यांत्रिक फिल्टर माउन्ट। थप कोइला माउन्ट। र यो पछि वास्तवमा सफ्नर आफूलाई कटौती। अर्को चरण पानी उपचार योजना मा राम्रो फिल्टर र accumulator द्वारा complemented छ। यस्तो प्रणाली को डिजाइन को अन्तिम तत्व सामान्यतया पराबैंगनी उपकरण disinfecting एकीकृत छ।
प्रायजसो विद्युत ढाड softeners, बस तुरुन्तै caisson मा तरल पदार्थ कन्टेनर पछि फिड ट्यूब मा मुग्ध। यस्तो फिल्टर वेल्स देखि जल मृदुकरण को लागि उपयुक्त हो वा राम्रो, रासायनिक रूपमा लगभग रूपमा राम्रो, घरमा सेवा गरे।
को बयलर र उपकरण मा सुविधाहरू माउन्ट
सफ्नर प्रयोग एकदम सेवा हीटर, लुगा धुने मेसिन वा रेडियोबिना, शवर र जस्तै। डी बयलर दुवै रासायनिक र reagentless उपकरण स्थापना गर्न सकिँदैन lengthens। जल मृदुकरण फिल्टर एक अपकेंद्र पम्प गर्न एकाइ को वरपर मा बयलर ताप लाइन पछाडि माउन्ट छ।
म्याग्नेसियम देखि उपकरण र क्याल्सियम लवण को सबै किसिमका सामान्यतया केवल विद्युत softeners, प्रयोग संग सुरक्षित। हाल उपकरण शरीर मा फिड पानी पाइप मा मुग्ध (तिनीहरूले मुक्का आवश्यक छैन), वा बस अर्को पर्खाल मा माउन्ट।
छत लागि वाष्प बाधा: सामाग्री, स्थापना, निर्देशन र प्रतिक्रिया
दिन ग्याँस सिलिन्डर: घर ताप संगठित
पीस - यो के हो? प्रक्रिया प्रविधि
पानी तताउने के हो
"Danteks": समीक्षा। "Danteks" - हावा कंडीशनर। हावा कंडीशनिंग "Danteks" ग्राहक समीक्षा मा बारेमा सारा सत्य
वेल्डिंग केबल - निर्माण मा एक अपरिहार्य सामाग्री
आफ्नै हातले घर को लागि एक सजावट कसरी बनाउने? घर सजाय लागि विचार
नौकायन जहाजहरू, तिनीहरूका प्रकार र विशेषताहरू। नौकायन नौकाहरू। तस्बिरहरू
कसरी घर मा धातु बाट खियाले हटाउन
आफ्नै हातले ग्रीन हाउसको सञ्झ्याल खोल्नको लागि स्वचालित